H & M အမျိုးအစား
H & M အမျိုးသားဝတ်
H & M အမျိုးသမီးဝတ်
 ကုန်သွယ်လိုသော ပစ္စည်းအနည်းအများကို ကျွမ်းကျင်စွာ ရောင်းချနိုင်လာခြင်း။
 အွန်လိုင်းလမ်းကြောင်း ပေါ်မှဈေးကွက် အတွင်းရှိ ဖောက်သည် များစွာကို ရယူနိုင်ခြင်း။
 ဖျော်ဖြေရေး နှင့် ကြော်ငြာခြင်း။
 ဈေးကွက်ချဲ့ ထွင်ရန် လွယ်ကူခြင်း
ကမ္ဘာကုန်သွယ်မှု နှင့် လေလံ
၀ယ်ယူသူ အဖွဲ့ ဝင်
ရောင်းချသူ အဖွဲ့ ဝင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဈေးကွက်ဖြန့်ဖြူးရေးစနစ်
မွှေးရနံ့ သင်းတဲ့နှင်းဆီပန်းလေး တွေနဲ့ ရေချိုးတာကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါ့ပါးလန်းဆန်းစေပါတယ်....
“နှင်းဆီ” ဟာ တော်ဝင်ပန်းတော့ မဟုတ်ပေမဲ့ မြတ်နိုးတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ကိုဖော်ဆောင်ပေးတဲ့ ပန်းလည်းဖြစ်တယ်။
နားတွင် လှပစွာနားကပ်တစ်ခုကဲ့သို့တပ်ဆင်နိုင်ပြီ Phone Handset နှစ်လုံး တစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်ထားနိုင်သေား Bluetooth Handfree mini လေးပဲဖြစ်ပါတယ်..။
mobile phone ရှိသူတိုင်း မရှိမဖြစ်ဆောင် ထားသင့်တဲ့...အဝေး ရိုက်..ဖုန်းcamera lens လေးပဲဖြစ်ပါတယ် ။
3Dရုပ်ရှင်ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမဲ့ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းကိုဒီ VR Box လေးထဲမှာထည့်ပြီးကြည့်ရှုရုံနဲ့ကိုယ်ကြည့်နေကျသာမန်ရုပ်ရှင်လေးတွေကိုရုပ်ရှင်ရုံမှာ3D ကား ကြည့်ရသလိုရုပ်လုံးကြွအသက်ဝင်စေမှာပါ။
 A5 (2016) မှာ Fingerprint Sensor ပါဝင်လာခြင်း၊ နောက်ပြီး CPU Octacore (1.6 GHz) နှင့် Memory (RAM 2GB) အသုံးပြုထားခြင်း၊  Body ပိုင်းမှာဆိုရင် ရှေ့ရောနောက်ပါ Corning Gorrila Glass4အသုံးပြုထားခြင်း။
 Display : 5.7 လက်မ  Processor : Quad-core 1.2 GHz
 မျက်နှာပြင် : ၅.၅ လက်မ Processor : Quad-Core 1.25GHz သိုလှောင်မှု : Internal 8GB, 2GB RAM
 One Year Official Warranty ၁၄၂.၁ (မြင့်) x ၇၀.၁ (လျား) x ၇.၀ (ထူ) မီလီ ၊ ၁၃၂ ဂရမ်။ ၅.၁” Quad HD Super AMOLED (၂၅၆၀x၁၄၄၀ ၊ ၅၇၇ ppi) 64-bit Octacore Processor 3GB RAM + 64GB စက်တွင်းသိမ်းဆည်းနိုင်မှု
 MSI ၏ နောက်ဆုံးလက်ရှိမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ VR ready support လုပ်တဲ့ GE62VR 6RF Apache Pro Gaming Laptop ဟာ နောက်ဆုံးအသစ်ထွက်ရှိလာတဲ့ 10series Graphic ဖြစ်တဲ့ GTX 1060M 6GGPU နှင့် Skylake 6th Gen CPU core i7 ကို တပ်ဆင်အသုံးပြုထားသောကြောင့် သာလွန်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကို ပိုမိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
မျက်နှာပြင်: 5.2 လက်မOcta-Core 1.6 GHz အမြန်နှုန်းStorage: 16 GB ကို,2GB RAM, အထိ 128 GB ကို၏ Micro SD
 Ipad Pro Display Size - 7.9 လက်မ
 မျက်နှာပြင်အကျယ် 15.6" ပါရှိခြင်း။ ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ Full HD Resolution(1366×768) ရုပ်ထွက်တွေကို ကြည့်ရှူခံစားအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
 Intel® Core i3 5005U  4GB DDR3  500GB HDD
 Display : ၅.၂ လက်မ  Processor : Octa-Core 1.6GHz ကင်မရာ : 13MP (အနောက်), 5Mp (အရှေ့ )
 Display : 5.0 လက်မ  Processor : Quad-core 1.3 GHz
 DENIM SHIRT လို့ ခေါ်ပြီး Jean သားနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ရှပ်အင်္ကျီကော်လာလက်ရှည်ပုံစံလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။  Instock ကုန်သွားတဲ့ပစ္စည်းများကတော့ (၂) ပတ် လောက်ထပ် စောင့်ပေးရပါမယ်။
 Huawei အမှတ်တံဆိပ်မှ ထုတ်လုပ်သည့် Y6 II မော်ဒယ်လ်ဖုန်းသည် 2G, 3G, 4G ကွန်ရက်များတွင် ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ဆက်သွယ်နိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါ သည်။  5.5 လက်မ အရွယ်ရှိမျက်နှာပြင်ကို အသုံးပြုထားသောကြောင့် အကြမ်းခံပြီး တောက်ပကြည်လင်သော မြင်ကွင်းများကို တွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
 6th Gen; Intel Core i5-6200U Processor (3MB L3 Cache,2.3GHz)ကို အသုံးပြု ထားသောကြောင့် စွမ်းဆောင်ရည်သွပ်လက်စွာအလုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။  မျက်နှာပြင်အကျယ်ကို တော့ 12″ HD Acer CineCrystalTM LED ကို သုံးပြု ထားပါတယ်။
 Intel N2840 (2.16G) ကိုအသုံးပြု ထားပါတယ်။  4G RAM ကို ထည့်သွင်းထားပါတယ်တယ်။ 500GB Memory ကို ထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။  Intel Integrated Graphics လည်းပါဝင်ပါတယ်။
 အရွယ်အစား 11မီလီမီတာ x 15မီလီမီတာ x 1မီလီမီတာ Micro SD card  2.7V ~ 3.6V
 Display : 5.7 လက်မ  Processor : Quad-Core 2.1+1.5GHz
 MSI ၏ လက်ရှိမှာ ခေတ်စားနေတဲ့ MSI GS70 2QE (i7) Gaming notebook Laptop တစ်လုံးဖြစ်ခြင်း။ Memory DDR3L 8GB x21600MHz (Max:32GB)တပ်ဆင်ထားခြင်း
 Display : 5.5 လက်မ Processor : Octa-core 1.6 GHz Storage : Internal 16GB, 3GB RAM Micro SD up to 128GB
 Display : 5.3 လက်မ  Processor : Quad-core 1.3 GHz
 နာမည်ကြီးတံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည့် HP မှ ထုတ်လုပ်သော X2 10-n117TU သည် window 10 entry ဖြစ်သည့် (2MB Cache, 1.4GHz) ကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့် အလွန်လျင်မြန်မည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါသည်။
 မျက်နှာပြင်အကျယ် 14" ပါရှိပြီး ကြည့်လင်ပြတ်သားတဲ့ Full HD Resolution ရုပ်ထွက်တွေကို ကြည့်ရှူခံစားအသုံးပြုနိုင်ခြင်း။
 မျက်နှာပြင်အကျယ် 14" ပါရှိပြီး ကြည့်လင်ပြတ်သားတဲ့ HD LED LCD Resolution ရုပ်ထွက်တွေကိုကြည့်ရှု ခံစားအသုံးပြုနိုင်မယ့်Laptop တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
 Network >>> ဂြီအကျဈအမျ / HSPA /  LTE SIM >>> Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
 ရှားစောင်းလက်ပပ်နှင့် ဗီတာမင်အီးတို့ဖြင့်ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်ထားသော နေလောင်ခံခရင်(မ်)ဖြစ်သည်။
 မျက်နှာပြင်: 5.5 လက်မ Processor ကို Quad-Core 1.2GHzသိုလှောင်မှု ပြည်တွင်း 8GB, 1.5GB RAM,
 ခါးပတ် ကြိုးကွင်းနဲ့အတူ, အိပ်နှင်္စခုပ်ဝင်ပါတယ် (ညာနဲ့ဘယ်ဖက်အကြွေစေ့အိတ်ကပ်ထည့်သွင်း) ထားပါတယ်။  (ဆိုဖာ, ဖိနပ်, အိတ်, ကားထိုင်ခုံစသည်တို့ကို) နဲ့ပေါင်းစပ်ကို၍ လျှာ်ခြင်းကို ရှာင်ကြဉ်ပါ။  အဝတ်လျော်စက် အတွင်းမှ အမှိုက်ခံပိုက်အိပ် ကိုအသုံးပြုရာတွင် သန့်ရှင်းနေစေရန်သတိပြုပါ။  Instock ကုန်သွားသောပစ္စည်းများ ကတော့ (2)ပတ်လောက်စောင့်ပေးရမည်ဖြစ်ပါတယ်။
 Display :6လက်မ LED Display  Processor : Quad-core 1.5 GHz
 display: ၅.၅ လက်မ Processor : Dual-core 1.82 + 1.44GHz
ဆက်သွယ်ရေး - USB Flash disk,တံခါးကိုအရွယ်အစား - 96 (W) 328 (L) မီလီမီတာ & အထက်×, တံခါးကိုအထူ - 55-70mm (စံ) / 40-55mm (optional ကို) / 70-90mm (optional ),
 1 coin = 1 $ နှင့်ညီမျှသည်။ Virtual coin သည် ကျွန်ှပ်တို့ problemclean.com တွင် ပြင်ပငွေကြေးအတိုင်းတန်ဖိုးညီမျှစွာ အသုံးပြုနိုင်သော အွန်လိုင်း ငွေကြေး အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
display: ၅.၇ လက်မProcessor Quad-Core 1.8 + 1.3GHz
 Display : ၅.၅ လက်မ
 Storage - 32GB ။ ဒေတာများကို လွှဲ ပြောင်းချင်း - 4MB/SEC ။ microSDHC ။
 အဆင့်မြင့် biometric နည်းပညာ  အမာခံ သံမဏီ ဆောက်လုပ်ရေး  illuminated keypad entry
TACLIGHT ( ၁မိုင်ပြေး အကြမ်းခံဓါတ်မီး )
 Computer ; Laptop ; Portable EVD & DVD တို့နှင့်တွဲဘက်အသုံးပြုနိုင်သည်။  SD ကဒ်ရော Stick ကော နှစ်မျိုးလုံးဆိုဒ်ပြီးတွဲသုံးလို့ရသလို့။
Remote ဖြင့်ထိမ်းချုပ်မောင်းနှင်နိုင်သေား လူကြီးဆော့ Drift ပြိုင်ကားအမျိူးအစား ပဲဖြစ်ပါတယ်.။ 4x4 drive ဖြစ်ပါတယ်။ ကားအောက်ဘက် ပြိုင်ကားမီးတန်ပြာပါဝင်၍ ညဘက်မောင်သေားအခါ လှပ ပါတယ်.။
 နွေရာသီ ပူအိုက်တဲ့အခါ မိမိနံဘေးနားမှာ mini air cooler လေးရှိတော့ သက်သာတာပေါ့။  သေးငယ်ပေမယ် ...လူတကိုစာ ကို direction2ခုနဲ့ လေအေးများကို မှုတ်ထုတ်ပေးနိုင်ပြီ power bank ဖြင့် ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ portable power bank လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
Drone W7 Venture 2.4 Ghz ပါရှိပြီး Channel6လိုင်းပါဝင်ပါတယ်။ HD Camera ပါဝင်ပြီး ကြည်လင်ပြတ်သားသော Photo..Video များရရှိနိုင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတကာတွင်လူကြိုက်များတဲ့ SKY EYE မှထုတ်လုပ်တဲ့ Drone လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။ W8 MODEL Wifi FPV Version အကြမ်းခံ Drone အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။
 အ၀ိုင်း ပြားလေးပေါ်တင်ထားရုံဖြင့် ကြိုးထိုးရန်မလိုပဲ wireless charging အဖြစ်ပျောင်းလဲပေးနိူင်သေား ပစ္စည်းပါ၊
Can use all android mobile. မည်သည် touch android ဖုန်းကိုမဆို အ၀ိုင်း ပြားလေးပေါ်တင်ထားရုံဖြင့် ကြိုးထိုးရန်မလိုပဲ wireless charging အဖြစ်ပျောင်းလဲပေးနိူင်သေား ပစ္စည်းပါ၊
*ကှညလြငပြှတသြားသော Full HD Resolution 1080 P ပါရှိပါတယြ။ *ထောငြ့တိုငြးမှာ 120 Degree မှငြ့မားတဲ့ ကယွပြှနြ့သော မှနဘြီလူးပါရှိပါတယြ။ *H.264 ဖှငြ့ ဓာတပြုံမွားကို အခွုံ့ အခွဲ့ လုပနြိုငသြော အဆငြ့မှငြ့ နညြးပညာပါရှိပါတယြ။
အမြဲတမ်း တီဗွီ ဖုန်းတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာ ငြီးငွေ့လာရောပေါ့။ ဒီလိုအရာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် မြင်ကွင်း ကျယ်ကျယ် လေးနဲ့ ကိုယ့်အိမ်မှာ အပန်းဖြေ အားရပါးရ ကြည့်လို့ရအောင် projector လေးတော့ဆောင်ထားသင့်တာပေါ့နော်။
*ကော်သားနဲ့မဟုတ် ဘဲ သံထည် နဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ကလေးကစားစရာ အရုပ်ဆက်ပစ္စည်းလေးပါ။ *3D Model သတ္တု အမျိုးအစားဖြစ့်ပီး ကာလာအရောင်စုံပါဝင်တဲ့ အတွက် ကလေးများ အမြင်အာရုံဆန်းသစ် မှုကိုရရှိစေမှာပါ။
 အရောင် : အဖြူ ရောင် ၊ အမဲ ရောင် ။  တွဲဖက် အသုံးပြု နိုင်သော Devicesများ Built-in amp, Bluetooth(R) 2.1+ EDR compatible, Hi-fi audio Connects to i Devices, smartphone, Android, tablet, notebook, MP3 player & more
 ကမ္ဘာအငြိမ်ဆုံး ထိမ်းသိမ်းရအလွယ်ဆုံးကူဆုံး ဆု့ ရရှိထားတဲ့ Drone လေးဖြစ်ပါတယ်။  Drone ကြီးများတွင်ပါဝင်လေရှိသော 360 Degree 3D Stunt ပါဝင်ပါသည်။
3Dရုပ်ရှင်ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမဲ့ပစ္စည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းကိုဒီ VR Box လေးထဲမှာထည့်ပြီးကြည့်ရှုရုံနဲ့ကိုယ်ကြည့်နေကျသာမန်ရုပ်ရှင်လေးတွေကိုရုပ်ရှင်ရုံမှာ3D ကား ကြည့်ရသလိုရုပ်လုံးကြွအသက်ဝင်စေမှာပါ။
 သင့်အင်တာနက် 4G speed လိုနေပြီလား ? internet video များကို မြန်ဆန်စွာ down ခြင်သလား
potable automatic cloths dryer
app install လုပ်စရာမလိုဘဲ ခလုပ်တချက်နှိပ်ရုံဖြစ်ဖြင့် Android နဲ့ IOS device များကို ချက်ခြင်း ချိန်းပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။mirascreen ထပ်အားသာချက်ကတော့ RAM - 256MB နဲ့ CPU-Corex A9 1.2GHz ကို အသုံးပြုထားတဲ့ အတွက် ဂိမ်းကစားရင်ဟန်းနေဒါ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင် ထောက်ထောက်နေဒါတွေမဖြစ်ဘဲ အဆင်ပြေပြေအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကြည်လင်ပျက်သားတဲ့ ရုပ်ထွက်နဲ့ နေရာမရွေး သယ်ဆောင်ရိုက်ကူးခြင်ပါသလား 4K Ultra HD Action Camera က သင့်ကိုကူညီပေးပါလိမ့်မယ် ။ရုပ်ထွက်အနေနဲ့ Ultra HD 4K ရုပ်ထွက်ဖြစ်တဲ့ အတွက် ကြည်လင်ပျက်သားတဲ့ ရုပ်ထွက်ကို မြင်ရမှာဖြစ် ပြီး Waterproof ဖြစ်အောင် Camera Case လေးပါဝင်တဲ့အတွက် ရေအောက်ထဲသယ်ဆောင်သွားလို့ရပါတယ်။
သင့်အင်တာနက် 4G speed လိုနေပြီလား ? internet video များကို မြန်ဆန်စွာ down ခြင်သလား ?အိမ်နှင့် ရုံးခန်များ၊ hotel နှင့် စားသောက်ဆိုင်များ သုံးရန်အတွက် Huawei မှ အသစ် ထွက်ရှိလာတဲ့4G Sim card ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်သေား 4G LTE CPE Router ပဲဖြစ်ပါတယ်။
တရားပွဲအတွက် သုံးခြင်ပါသလား ? ရပ်ကွက်အတွက် သုံးခြင်ပါသလား ? စာသင်ခန်းအတွက်သုံးခြင်ပါသလာ? ခဏတာ ပွဲအတွက် လိုအပ်နေပါသလား?အသံလဲ ကျယ် ဈေးနန်းသက်သက်သာသာ နဲ့ ကိုယ့်အိမ်နီးချင်းက အမြင်ကတ်လောက်အောင် ကောင်းတဲ့ speaker နဲ့ microphone လေး ရှာနေပါသလား ဒီ Karaoake Microphone with bluetooth Speaker လေးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
ဆိုင်ဖြင့် ရောင်းချသူများ /တည်နေရာများ
$13.06 $16.32 -20%
TK309 Vehicle GPS Tracking Device
$36.04 $48.70 -26%
$62.00 $74.70 -17%
M8S Plus DVB TV Box(Androidtv)
$50.91 $57.20 -11%
တည်နေရာကို အလွယ်တကူသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ GPS Tracker with Secuirty Alarm လေးက ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ အရေးပေါ် ထောက်လှမ်းဖို့ လိုအပ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ GPS Tracker လေးက လွယ်လင့်တကူ ဖွက်ထည့်ပေးလို့ရအောင်အရမ်းသေးငယ်ပြီး တိကျတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပေးနိုင်ပါတယ် ။ တဖက်က အသံတွေ ကိုလဲ တခြားသူမသိအောင် အလုပ်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက် တကယ်အသုံးဝင်တယ်ဆိုဒါမမှားပါဘူးခင်ဗျာ
$11.97 $21.00 -43%
Phone / Remote မထိန်းဘဲ လေထဲမှာ အလိုလျောက်ရပ်တန့်နိုင် သည့် ။ Video , Photo ရိုက်ကူးမူပိုလွယ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ အသေးဆုံး အမျိုးအစား ဖြစ်တဲ့ Camera ပါ ပြိုင်ပွဲဝင်လို့ရတဲ့ world smallet competition R/C drone နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။
ပြီး ပို များစွာ
ဘာကြောင့် ကျွန်ပ်တို့ နှင့် ရောင်းမည်နည်း? (Why sell with us?)
ယခုပင် Sign up လုပ်မည်။
T-163 Wirless Music Receiver
ရေလုံပြီး အရမ်း hotဲဖြစ်တဲ့ Live GPS ကောင်းကောင်းတစ်ခုကို ရှာနေပါသလား ?သင်္ကြန် ကာလအတွင်းတောင် အိမ်ကစိတ်ပူစရာမလိုဘဲ စောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့ WaterProof Live GPS လေးကို ၀ယ်ထားဖို့ မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ ။Live GPS လေးက ခေတ်ကာလနဲ့အညီအရမ်းအသုံးဝင်ပါတယ် ။ အိမ်ပြန်နောက်ကျတတ်တဲ့ သားသမီးတွေအတွက်ဖြစ်ဖြစ် ၊ ချစ်သူအတွက်ဖြစ်ဖြစ် ညဘက်အပြင်ထွက်တတ်တဲ့ သူတွေအတွက်အဖြစ်...
3 in 1 Kids GPS Smart Watch (Real Time)
$21.46 $37.00 -42%
ကလေးများအတွက်သာမက ကားအတွက်ပါအသုံြး့ပုနိုင်မယ့် GPS Watch လေးပါ Google map အတွက်ရော ဖုန်းပြောရန်အတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်မယ့် အရာလေးပါ
Wearable Bracelet Video Recorder
Second Generation Battery
I Design Bluetooth Earphone
$10.24 $18.62 -45%
Bluetooth နားကြပ်ကောင်းကောင်းကိုမှ လိုချင်တဲ့ သူတွေအတွက် အရေအသွေးမြင့်....ဘက်စုံသုံး ၊ လူအမြင်ဆန်းတဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ဒီဇိုင်း နာကြပ်လေးပါ.။ အားကစားလုပ်ရင်သုံးသုံး....စတိုင် ကျကျတပ်ကာဟိုဟို ဒီဒီသွားမလား....သီချင်းနားထောင်ရတာ ကြိုက်တဲ့ Friend တွေအတွက် အသုံးတည့်စေမဲ့ ပစ္စည်းလေးဘဲ ဖြစ်ပါတယ်
GIRLS heme stripe shorts (KIDS)
Flexible Mobile Wireless Keyboard
 IOS Device (For iPhone5/5s/5c/6/6s/6plus/ SE/iPad4/Air/Mini/Mini2)Apple productများ။  Andriod Tablet & Phone များ (For Any Samsung,Huawei,Oppo,etc)
Juice Blender (Portable and Rechargeable...
$16.15 $19.23 -16%
- အလွယ်တကူသယ်ဆောင်သွားနိုင်ပြီး ဘယ်နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ဖျော်သောက်လို့ရတဲ့ Portable and rechargeable blender လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါရစေ။
$5.29 $7.90 -33%
 ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေ၊ စတိုးဆိုင်ကြီးတွေ၊ ပွဲရုံလုပ်ငန်းတွေ ၊ စားသောက်ဆိုင်ကြီးတွေ အတွက် ငွေရေစက်လေးကို စဉ်းစားပေးစေချင်ပါတယ်။
5.8G FPV Mini Drone with Display
$56.64 $68.24 -17%
Hight Resolution Wirless Pen Camera
MAGICAL MODEL No.816C-6
model : Mainan Edukasi Edukatif iron commander magical model toys 816C-2